Ahariharin’ny fanairana fahafotsian’ny vatoharan’i Tobago fa tsy misy ny ‘lalan-kafa’ iadiana amin’ny krizin’ny toetrandro · Global Voices teny Malagasy
"Dingana voalohany fanairana fihafotsiana" ny vatoharan'ny nosy
Voadika ny 10 Oktobra 2019 5:28 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, Ελληνικά, Yorùbá, عربي, English
vatohara tandroka diera lasa fotsy. Saripikan'i Matt Kieffer, CC BY-SA 2.0.
Tafiditra tsara ao anatin'ny rafi-boary an-dranomasina sy ny toekarenan'i Tobago ny vatoharany. Fonenan'ireo karazan-javamananaina an-dranomasina (sady fahazoan'ireo mpanjono ao an-toerana ny trondro betsaka indrindra), miaro ny morontsiraka amin'ny fikikisan'ny onja sy ny fiantraikan'ny tafio-drivotra an-tany mafana koa izy ireny. Fisintonana fizahantany malaza ihany koa ny toerana be mpandeha tahaka ny harandranomasin'i Buccoo.
Saingy taorian'ny famoahana taratasy an-gazetin'ny Ivotoerana misahana ny resaka an-dranomasina (IMA) an'ny firenena tamin'ny 22 aogositra 2019, izay nampitandrina — araka ny valim-panadihadiana navoakan'ny Coral Reef Watch avy amin'ny Fitantanana ara-atmôsifera sy Riaka Nasionaly (NOAA) — dia napetraka ho araha-maso akaiky amin'ny “fanairana fahafotsiana dingana voalohany ” ny vatoharan'i Tobago. Azo heverina tsara koa fa mety hiditra dingana faharoa ao anatin'ny herinandro vitsivitsy monja izao fahafotsiana izao, izay tsy mandrahona ny fisian'ny vatohara ihany fa ny fiainana an-dranomasina ao amin'ilay nosy sy ny vahoakany ihany koa.
Fa inona marina ilay lany loko [mihafotsy]?
Miaina miaraka amin'ny lompotra symbiotika ary lasa fonenany mihitsy moa ireo vatohara, manampy azy io hitahiry ny otrikaina sy hanilika ny loto. Ho setrin'izany, omen'ny lompotra ny angovo ilainy ny vatohara hitomboany, fa mety manohintohina io fifandraisam-piasana miaraka io ny fiovana mahery vaika amin'ny maripanan'ny rano.
Ahifiky ny vatohara ny lompotra, izany hoe ny foto-tsakafony, rehefa mafana na mangatsiaka loatra ny rano. Ho avy ny fotoana ho faty mosary ny vatohara, ny marika miharihary indrindra amin'izany toe-javatra izany dia ny fahaverezan'ny vatohara ny lokony avy amin'ny volombatolalala matroka na maitso ho fotsy tahaka ny nify na ny taolana
Midika ny “fanairana fahafotsiana dingana voalohany ” fa efa tena manomboka mihafotsy ny vatohara. Manoro hevitra ny biôlojista sy ny olompirenena ny IMA hanara-maso akaiky ny fihafotsiana ao anatin'ny 9-12 herinandro na mihoatra.
Ny fahafotsiana dingana faharoa dia fanondroana fielezan'ny fahafotsian'ny vatohara sy ny fahafatesany.
Inona no miteraka izany?
Araka an'i Anjani Ganase, manampahaizana ao an-toerana momba ny haran-dranomasina, ny fitomboan-kafanan'ny rano no mpandray anjara voalohany amin'ny fahafotsian'ny vatohara ao Tobago –izay vokatry ny fikorontanan'ny toetrandro.
Amin'ny alalan'ny imailaka i Ganase no nanazava fa ny riaka no mitelina ny hafanana amin'ny atmosfera, izay mahatonga ny rano hihamafana — indrindra fa ny rano marivo tahaka ny riakan'i Karaiba.
Ny marina, efa mihoatra lavitra an'i Tobago mankany amin'ny harandranomasin'ireo Antilles kelikely ny fanaraha-maso akaiky maharitra 12 herinandro napetraky ny NOAA. Efa tafatoetra ao amin'ny fanairana dingana faharoa amin'ny fahafotsiana ny harandranomasina any amin'ireo Antilles lehibebe sy ao Kiobà :
Sioka voatonona: Hitany ny atsasaky ny vatohara eto amin'ny planeta. Ankehitriny manamafy ity siantifika ity fa ny fahasarotana mihatra amin'ny vatohara no “fanombohan'ny voina manerantany”.
Mahatonga ahy halahelo izany. Efa taona maro izao ny miala aina ny haran-dranomasin'i Tobago. Ny loto, ny fandefasantsolika sy etona, ny fanjonoana no nanimba ireo haran-dranomasintsika mahafinaritra. Mila miaro izay sisa tavela isika.
Manao ahoana ny fiantraikany?
Fandrahonana mampanahy ny fahafotsian'ny vatohara. Satria ny harandranomasina no manome fonenana ahafahan'ny trondro mialoka, sakafo ary ny tena zava-dehibe dia fialofana ho an'ny zanany mandra-pahavonona ireo hiavo-tena any amin'ny riaka midadasika kokoa, hampisy fiantraikany amin'ny fahafahan'ireny karazan-trondro ireny hiavo-tena ny fahaverezan'ireny haran-dranomasina ireny. Ary hisy voka-dratsy amin'ny fiainan'ny mpanjono ao an-toerana ihany koa izany.
Miankina tanteraka amin'ny sehatry ny fizahantany ao an-toerana i Tobago; voalaza fa mahasintona ny 40 isanjaton'ny mpizahatany ao amin'ny nosy ny haran-dranomasiny. Hihena ireo harandranomasina maha-te hizaha raha mihafotsy hatrany ireo vatohara, ary hampihena ny dôlaran'ny fizahantany izany, izay hiantraika any amin'ireo sehatrasan'ny fampiantranoana: hotels, restaurants, tolotra fitaterana ary orinasam-pitetezantany.
Ny tena mahasadaikatra amin'ity toe-javatra ity, tena mila dia mila ny harandranomasina isika hitelina ny herin'ny onja sy hanangana fampitoniana manelanelana ny riaka sy ny morondrano amin'izao tafio-drivotra an-tany mafana mihamahery vaika izao, saingy ireo haran-dranomasina ireo mihitsy izao no simban'ny fihafanan'ny tany amin'ny ankapobeny.
Asehon'ny fanadihadiana fa ny haran-dranomasina no miaro ny 90 isanjaton'ny morondranomasin'i Tobago tsy ho kaohin'ny onja.
Tao amin'ny kabary nasongadina iray nandritra ny taona Iraisampirenena ho an'ny Harandranomasina tao amin'ny Oniversiten'i Antilles tamin'ny taona 2018, nilaza ny tena maha-zavadehibe io fomba fiasa io ny Profesora John Agard noho ny fitomboan-kerin'ny tadio sy ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina.
Ahoana ny hampitsaharantsika izany?
NIlaza i Ganase fa ny tsi-fisian'ny fitantanana sahaza nahatonga ny fanjonoana tafahoatra sy ny tsy fahafehezana ny fandotoana no nahatonga ny fahafotsian'ny vatoharan'i Tobago ho ratsy indrindra. Raha mitohy izao, hoy ny fanazavany, dia ilaina indrindra ny fitantanana mavitrika sy ny fiarovana hisian'ny fahasitranana sy ny fitomboana :
Ideally, coral reefs should be closedto the public and placed into an intensive recovery programme to ensure healthy fish communities and water quality that will support coral growth and recruitment.
Ny tena tsara indrindra dia tokony tsy ho azon'ny daholobe idirana any amin'ny haran-dranomasina ka ho ampidirina ao amin'ny fandaharana fanasitrahana mavitrika hiantohana ny firoboroboan'ireo andian-trondro sy hahatsara ny rano izay hanohana ny fitomboan'ny vatohara sy ny fandraisana azy.
Voamarina hatrany ny hetsiky ny tsirairay hampihena ny dian-karibônina saingy mila olompirenena ihany koa isika hitaky hetsika bebe kokoa avy amin'ny governemantantsika hanome fotodrafitrasa, fitaovana sy fanabeazana ilaina amin'ny fiarovana ny toetrandro sy ny fizàrana azy. Mila fanohanana ny vondrom-piarahamonina hitantana sy hikajy ny loharanonkarena voajanaharintsika tsy avy amin'ny governemanta ihany fa avy amin'ireo fihariana sy vondronasa mampiasa ireo loharanonkarena ireo.
Tokony hotakian'ireo governemantan'ireo nosy ao amin'ny faritra ny ezaka iraisampirenena hiatrehana ity krizin'ny toetrandro ity. Tamin'ny 11 Septambra 2019 i Mia Mottley, Praiminisitr'i Barbades, no niresaka ity lohahevitra ity tao amin'ny Foiben'ny Firenena Mikambana tao Geneva, mandrisika ireo firenen-dehibe hanao izay tsaratsara kokoa hiadiana amin'ny fikovan'ny toetrandro. Nolazainy tamin'izany fa “tsy manana fotoana ho amin'izany ny nosin'i Karaiba satria mbola sahirana miavo-tena izahay”.
Manaiky amin'ny maha-vay an-dohan-draharaha azy ity i Ganase. “Mila ezaka” izay endrika rehetra amin'ny fanampiana hiadiana amin'ny fiovan'ny toetrandro sy fahafotsian'ny vatohara, hoy izy, indrindra eo amin'ny ambaratonga politika:
Tsy ho mora izany raha amin'ny jery iraisampirenena, saingy tsy misy mihitsy ny fomba hafa